Posted by တန်ခူး at 10:40 PM 27 comments:
ချစ်မမကြီး မခင်မင်းဇော်က တက်ဂ်ထားတာလေးပါ။ အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင် လွယ်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်ရေးကြည့်မှ အတော် ဦးနှောက်စားရပါတယ်။ အမှတ်တရတက်ဂ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ချစ်မမရေ။
T for Takhu…
1. What is your name : Takhu (တန်ခူးလမှာ မွေးသူမို့ လေ…)
2. A four Letter Word : Time (အချိန်နဲ့ ဒီရေသည် လူကို မစောင့်တဲ့…)
3. A boy's Name : Twitpi (ဟော်လီဝုဒ်မင်းသား မဟုတ်ပါဘူး… မြန်မာပြည်က နာမည်ကျော် တွတ်ပီ)
4. A girl's Name : Tabitha Nauser (Singapore Idol 2009 contestant ပါ… အသက် ၁၇နှစ်ထဲ ရှိသေးတဲ့ လှလဲလှ ချစ်စရာလဲကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး… ဒါပေမယ့် လူကြိုက်နဲတာ အံ့သြစရာ… ကိုယ်ကတော့ ကြိုက်တယ်လေ…)
5. An occupation : Teacher (လုပ်ချင်ပြီး မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်…)
6. A color : Tomato (သားရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရောင်လေ…)
7. Something you'll wear : Tree Bulk (နေ့ တိုင်း သနပ်ခါးမလိမ်းရရင် မနေနုိုင်ပါဘူး…)
8. A food : Tea leaf salad (အကြိုက်ဆုံး… ဘယ်အချိန်ထမေးမေး စားချင်တယ်… ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ဝေးခဲ့ရတာကြာပေါ့လေ…)
9. Something found in the bathroom : Towel ( တဘက်က ရေချိုးရင် မရှိမဖြစ်လေ…)
10. A place : Toa Payoh Buddhist temple ( ဘုရားတရားမမေ့တတ်သူပါ…)
11. A reason for being late : Traffic jam (ဖြစ်နေကျ… မိုးရွာတဲ့နေ့ ဆို ပိုဆိုးသေး…)
12. Something you'd shout : Tell me the truth (လိမ်လွန်းလို့ … သည်းမခံနိုင်ဘူး…ဘယ်သူ့ ပြောလဲ သဘောပေါက်တယ်မိုလား…)
13. A movie title : The Princess Diaries (မင်းသမီးလေးကလဲလှ ဇာတ်ကားလေးကလဲ မြူးမြူးလေးမို့တီဗွီမှာ လာတိုင်းကြည့်ဖြစ်တယ်… ဘုရင်မကြီးကိုလဲကြိုက်တယ်…)
14. Something you drink : tea (Myanmar) (ရေနွေးကြမ်းကို ဆိုလိုတာပါ…)
15. A musical group : The eagles (မြန်မာသီချင်းတွေအများကြီး ကော်ပီလုပ်ထားလို့ လား မသိဘူး… ကြိုက်တယ်… ရင်းနှီးတယ်…)
16. An animal : Tiger (တင်္နလာကျားလေ… ကိုယ့်နေ့ နံပေါ့…)
17. A street name : TPE (ဘာလို့ လဲ မသိဘူး… အရောက်အပေါက်နဲ လို့ ထင်တယ်… အဲဒီ express way ကသွားရတာပျော်တယ်…)
18. A type of car : Trolly (အမြင့်ကြီးမမှန်းရဲပါဘူး… ကိုယ်ဟာ ဘ၀သမားပါ…)
19. The title ofasong : Take me home ( ကာရာအိုကေမှာ အင်္ဂလိပ်သီချင်းဆိုခိုင်းရင် ဒါပဲရလို့ဆိုရတာလဲ လွယ်လို့ဆိုနေကျ…)
20. A verb : Try (တနေ့ တလံ ပုဂံဘယ်ရွေ့ မလဲတဲ့… အားမလျော့နဲ့ … ကြိုးစားကြပါစို့ နော်…)
1. What is your name : တန်ခူး (တ တမာပင် ရွာအ၀င်…ဟုတ်ပါဘူး…တ တန်ခူး ဘလော့ရူး… ဟိဟိ…)
2. A four Letter Word : တောက်တီးတောက်တဲ့ (ကောင်းကောင်းပြောပါ…အဲလိုတွေ လျှောက်မပြောနဲ့ … မကြိုက်ဘူး…)
3. A boy's Name : တွတ်ပီ (သိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ကောင်ကလေး…)
4. A girl's Name : တင်ဇာမော် (girl တော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး… အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်ထဲက တယောက်…)
5. An occupation : တူရိယာပညာရှင်( တကယ်တော့ ၀ါးလက်ခုပ်တောင် ဖြစ်မြောက်အောင် မတီးတတ်ပါဘူး… စန္ဒယားလေးတီးပြီး မာမာအေး သီချင်းလေးတွေ ညည်းချင်ရုံသက်သက်ပါ…)
6. A color : တောက်တောက်ခါးခါး ( ထင်ပေါ်အောင်လို့ လေ… မယုံပါနဲ့ … တထည်မှ မရှိပါဘူး…)
7. Something you'll wear : တရုတ်ပိတ် (RIT ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်တုန်းက သိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့… အဆင်နုတ်နုတ်လေးတွေဆို ခုထိချစ်တုန်း…)
8. A food : တို့ ဘူးသုတ် (အထမ်းသည်တို့မှောင်မှောင်သည်တို့ ရောင်းတာဆို ပိုကြိုက်တယ်…)
9. Something found in the bathroom : တစ်ရှုးပေပါ (အိမ်သာနဲ့ ရေချိူးခန်းတွဲလျက်မို့ ပါ…)
10. A place : တောင်ကြီး (ဒီတခေါက်ပြန်ရင်သွားချင်တာ… မရောက်တာကြာပြီလေ…)
11. A reason for being late : တိုးရကြိတ်ရ(saleဆိုသွားလိုက်တာ တိုးနေကြိတ်နေတာနဲ့အိမ်ပြန်နောက်ကျသွားတယ်… မဆူနဲ့ နော်…)
12. Something you'd shout : တော်တန်တိတ် (ဆက်မပြောပါနဲ့ တော့… နားထောင်ဖို့စွမ်းအားကို မရှိလို့ ပါ… ဘယ်သူ့ ကို ပြောတာလဲ…သဘောပေါက်)
13. A movie title : တခါကတဘ၀(ခင်သီတာထွန်း ဆံပင်စင်းစင်းလေးနဲ့ သိပ်လှတဲ့ကား… ကြည့်ဖူးလား…)
14. Something you drink : တွင်းရေ (အိမ်ပြန်ရောက်ရင် တွင်းရေလေးသောက်လိုက်ရတာကိုက အရသာတမျိူး… ရေကို အနံ့ အရသာမရှိဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ… တွင်းရေလေးက အေးပြီးချိူမြနေတာ…)
15. A musical group : တယောကိုတင်ရီ (ဟိဟိ… တ၀မ်းပူနဲ့စတာ ဒါပဲ စဉ်းစားလို့ ရတယ်… အမှန်ပြောရရင် တယောကို သိပ်မခံစားတတ်ဘူး)
16. An animal : တောက်တဲ့…ဟုတ်ပါဘူး… တစ်တီတူး…ဒါလဲမကောင်းဖူး… တီကောင်… ဟင်း…ပိုတောင်ဆိုးသေး (ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့…)
17. A street name : တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း (ရင်ထဲ အမြဲရှိတဲ့ လမ်းကလေးပါ…)
18. A type of car : တက်စီ (အချိန်လုရတဲ့အခါ နှမျောမျောနဲ့ စီးရတဲ့ ကားပေါ့…)
19. The title ofasong : တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်း (ချိုပြုံးဆိုတာ အကြိုက်ဆုံး… ဘာလို့ လဲ မသိဘူး နားထောင်မိတိုင်း ငိုချင်တယ်…)
20. A verb : တိုးတက်အောင်ကြံဆောင် (အဟဲ…အဆုံးပိတ်လေးကို တည်တည်တံ့တံ့နဲ့ပိတ်လိုက်တာ…)
၁) ညီမလေး ကေ ( ကကြီးက ရေးလို့ ကောင်းမယ် ထင်လို့ ပါ… တက်ဂ်တာ တက်ဂ်ရတာ စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော် အဆက်ပြတ်သွားရင် ဒုက္ခ… နှစ်မျိုးလုံးပြိုင်တူရေးနော်… နှိပ်စက်တာ ဟုတ်ဘူးနော်)
၂) ညီမလေး မိုမိချီ ( ဒီနာမည်အသစ်လေးနဲ့တခါမှ မတက်ဂ်ဖူးလို့ )
၃) ညီမလေး ခွန်မြလှိုင် ( ပိုကြူးလေးအတွက် ဖတ်စာလေးကို ကြိုက်သွားလို့ လှိုင်ရေ)
၄) မောင်လေး ရွာသားလေး (Y က ခက်မယ်ဆိုတာတော့ သိပါတယ်… နှိပ်စက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ နော်)
၅) မောင်လေးပုလုကွေး ( Pကလဲ လွယ်မယ်… ပ ကလဲ လွယ်မယ်… တခါမှ မတက်ဂ်ဘူးလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့စတက်ဂ်လိုက်တယ် ပုလုရေ)
ပျော်စရာလေးမို့ရေးပေးကြပါနော်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by တန်ခူး at 12:04 PM 17 comments:
Posted by တန်ခူး at 9:43 PM 18 comments: